पक्कै पनि सबैलाई Tmutarakan रूपमा क्षेत्र को यो नाम सुने छ। केही कारणले यो एक साधारण संज्ञा छ कि कल्पित छ। तर यो नामको सहमतिलाई - "। रिमोट प्रान्त" "उजाड", "backwoods" वा वास्तवमा, बन्दोबस्त, कि नाम बोकेका Taman प्रायद्वीप को वर्तमान क्षेत्रमा अस्तित्व। भूमि को प्लट दुई समुद्र (काला र Azovskoe), इन्डेन्ट estuaries एक अधिकता अलग छ। Temryuk - र एउटा मात्र क्षेत्र हो। यसको प्रशासनिक केन्द्र - Temryuk शहर।
Genoese बस्ती - को XIV शताब्दीमा, आधुनिक शहर कोपा थियो। को XV को अन्त मा - xvi शताब्दीको सुरुमा यसलाई भाग हो जो शहर Tumnev, बदलिएको थियो यो क्राइमन Khanate। धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले एक फोर्ट (1556 मा) Kabardian राजकुमार Temryuk Idarovich निर्माण र आफूलाई पछि यो नाम। एक गढ रूपमा बीस भन्दा कम वर्ष एक पटक फेरि क्राइमन खान उत्प्रेरित र पुन: नामाकरण भयो - AFIS भनिन्छ अहिले यो क्षेत्रमा। तीन सय वर्ष पछि पछि बन्दोबस्त को उत्पत्तिभन्दा शहर स्थिति प्राप्त। खैर, बस 10 वर्ष मा शहर जनसंख्या लगभग दुई पटक बढेको छ: 1860 मा त्यहाँ 4.5 लाख मान्छे बस्ने र 1970 मा - पहिले नै बारेमा 8500।
समुद्र पोर्ट Temryuk
Temryuk शहर देखि बस4किलोमिटर बन्दरगाह शीर्षक छ। Azov समुद्रको सबैभन्दा प्रशस्त नदी को KUBAN किनारा मा बग्छ छ जहाँ यो स्थित छ। यो अलेक्जेन्डर द्वितीय, मार्च 31, 1860 को उर्दी गरेर यो पोर्ट देखियो। कागजात मा सम्राट Azov पोर्ट को सागर खुलेको छ, र Temryuk बंदरगाह शहर यसलाई अर्को स्थापित भन्नुभयो।
समुद्र ढोकाहरू को उपस्थिति शहर को विकास गर्न एक शक्तिशाली गति भएको छ। 1861 यहाँ खोलिएको थियो हुलाक कार्यालय मा, चार वर्ष पछि, वहाँ एक टेलीग्राफ स्टेशन थियो। यसलाई अर्को पाँच वर्ष लाग्यो, र शहर सार्वजनिक बैंक Temryuk मा स्थापित भएको थियो। एकै समयमा शहर भारत-युरोपेली टेलीग्राफ सञ्चालन गर्न थाले। सक्रिय विकास ढुवानी 4,50,000 rubles को बन्द पोर्ट को निर्माण को लागि विनियोजन गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेको छ। को नहर देखि तारले र समुद्र जोडिएको नदी KUBAN स्लिभ काम समयमा। , शहर जनसंख्या 15 हजार मान्छे पोर्ट को निर्माण पूरा भएको थियो जब। पोर्ट Temryuk क्षेत्र मा एक अग्रणी उद्यम भएको छ। यहाँ कम्पनीहरु ग्रीस र फ्रान्स कार्यालय खुलेको।
धेरै दशकसम्म, मुख्य समस्या उच्च पोर्ट रेकर्ड थियो। किनभने महत्वपूर्ण तलछट बालुवा पोर्ट को मात्र खोक्रो-मस्यौदा जहाजहरु लागि उपलब्ध थियो। अझ बढाउन तल बारम्बार प्रयास गर्नुभयो, तर चाहेको परिणाम हासिल थिएनन्। हामी यो समस्या समाधान गर्न एक माध्यम चाहिएको छ। र राशि यो एक नयाँ पोर्ट निर्माण सक्ने त ठूलो थियो। पोर्ट समस्या को निर्णय पहिलो विश्व युद्ध, क्रान्ति र सोभियत संघ को आर्थिक पतन ढिलाइ।
चौध वर्ष (1935 1949 मा) को लागि Temryuk बन्दरगाह Morflot सोभियत संघ को मंत्रालय को सम्पत्ति थियो। 1949 को गर्मी मा उहाँले मत्स्य मंत्रालय हस्तान्तरण गरिएको थियो। नौ वर्ष पछि पोर्ट Temryuk एक पुल शहर संयोजन गरेर हटाइएको थियो। यो 1994 सम्म स्थिति प्राप्त गर्न व्यवस्थित।
आज Temryuk (पोर्ट) तीव्र गतिमा विस्तार जारी छ। उहाँले आर्थिक विकास गर्न सबै कुरा छ। वर्ष द्वारा वर्ष, वृद्धि र कुल कारोबार। 2016 को पहिलो आधा मा कार्गो को 1.4 लाख टन राशि। विशेषज्ञहरु तरल रसायन र क्रिमीआ गर्न KUBAN देखि ग्यास पाइपलाइन निर्माण को लागि आवश्यक अक्रिय सामाग्री को बदलन मा एक स्थिर वृद्धि याद गर्नुहोस्।
19 बर्थ एक लम्बाइ 140 मिटर, चौडाइ अधिक छैन संग जहाजहरु स्वीकार गर्न तयार छन् - 17.5 मीटर, र अवशेषहरु 4.6 मिटर भन्दा बढि हुनु हुँदैन। सबै वर्ष पोर्ट Temryuk।
एक हास्यास्पद नाम Chushka Azov को समुद्रको Kerch Strait स्थित संग थुक्नु मा, काकेशस को पोर्ट छ। यो कार्गो कारोबार को पाँचौ छ रूस को पोर्ट। यसको क्षमता - प्रति वर्ष 400 हजार यात्रु। साथै, यो तपाईं रेल पानीजहाज लिन अनुमति दिन्छ।
निर्माण काकेशस को पोर्ट गत शताब्दीको बीचमा थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सेवा गर्न छँदा नौका पोर्ट र multimodal परिवहन। 2004 मा, पोर्ट पुनर्निर्माण गरियो। त्यतिबेलादेखि जहाज र सामान कारोबार आंकडा संख्या वृद्धि गर्न रोकिंदैन। पोर्ट देखि एक दिन लगभग 30 उडानहरू गरिन्छ - नौका हरेक एक आधा घण्टा छोड्छ। जहाँ क्याफे खुला ठूलो हल, मा unnoticed पारित हुनेछ एक घण्टा भन्दा कुनै थप आशाले लोड। मात्र समस्या - मौसम अवस्था मा पोर्ट को निर्भरता। समाधान यो मार्फत पुल को कमीशन सक्षम हुनेछ Kerch Strait।
देश को दक्षिणी भाग मार्फत यात्रा प्रेम अक्सर काकेशस देखि Temryuk पोर्टमा दूरी बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। नक्सा बस 55,1 किलोमिटर मा दुई अंक बीच एक सीधा लाइन। तर, वास्तविक दूरी भन्दा 66,8 मी ठूलो छ। एक घण्टा कार द्वारा यस दूरी हटाउन। Hikers थप समय आवश्यक हुनेछ - Temryuk पोर्ट Kavkaz को बाटो मा बस भन्दा 13 घण्टा छ। यसबाहेक, तपाईं बसें मा प्राप्त गर्न सक्छन्।
पर्यटन क्लस्टर - यो के हो? अवधारणा परिभाषित
नदी माथि नदी: म्यागडेबर्ग जल पुल भयानक!
जहाज "Valery Bryusov": इतिहास, फोटो, आधुनिक वास्तविकताहरु
"माइकल Tanic" - परिभ्रमण लागि डुङ्गा
एक क्रूज मा पानी मा व्यवहार को नियम
पटाया देखि कम्बोडिया भ्रमण - मौका Angkor Wat र मात्र हेर्न
Cheaply आफ्नो हातमा एक बार कसरी बनाउने?
रोम विमानस्थलबाट रोम प्राप्त गर्न कसरी। विमानस्थलमा देखि रोम प्राप्त गर्न कसरी "Fiumicino"
प्लास्टिक चयापचय, शरीर मा यसको सार र भूमिका
स्थापना USB फ्लैश ड्राइव विन्डोज7- Usb-ड्राइभमा छवि लेख्नुहोस्
मैनीक्योर कालो-र-पहेलो: प्रदर्शन प्रविधी, रोचक विचार र सिफारिसहरू
इपिफ्यानी Name: को संकेत र तिहार को इतिहास
Siwash लेक, क्रिमीआ